ကျနော့်ကလေးတွေကိုရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ အကောင်းဆုံးသမိုင်းကြောင်းကိုတွစ်တာပြောင်းလဲခြင်း - သတင်း
သငျသညျဖြစ်ကောင်းငါဒီနေ့တွစ်တာအပေါ်လှည့်ပတ် floating memes ခဲ့ငါ့ကလေးတွေပြောပြမယ်အနည်းငယ်တွေ့မြင်ပါတယ်။ ဒါဟာလူတိုင်းနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်လာပြီနှင့်ငါမအံ့သြသွားဘူးသောနောက်ဆုံးပေါ် meme ပါပဲ, ငါ့ကလေးတွေ meme ကမ္ဘာကြီးကိုအများကြီးပိုကောင်းရာအရပျတူစေသည်ပြောပြသည်။
ဒါဟာသမိုင်း, ပြန်ရေးရန်သင့်အခွင့်အလမ်းပါပဲ။ အနာဂတ်၌ကျွန်ုပ်တို့သည် Meghan Markle သည်ဘုရင်မဖြစ်သည်ဟုလူများထင်သောကမ္ဘာတွင်နေထိုင်ကြလိမ့်မည်။ Love Island မှ Ovie သည်သူတို့၏ဖခင်ဖြစ်ပြီး Queer Eye မှ Jonathan သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် Angus Thong နှင့်ပြီးပြည့်စုံသော snogging သွန်း
meme စတင်ခဲ့သည့်နေရာ၊ နောက်ကွယ်တွင်မည်သို့အကောင်းဆုံးရနိုင်မည်နည်း။
အဆိုပါ meme format နဲ့အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ သငျသညျမည်သူမဆိုသို့မဟုတ်ဘာမှ၏ဓာတ်ပုံရိုက်ယူ။ ငါကဤသူသည်ငါ့ကလေးတွေပြောပြပြီးတော့အခြားအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူဖြည့်တယ်ငါကစာတန်း။
များသောအားဖြင့်၎င်းသည်နာမည်ကြီးသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်ကသင်၏ကလေးများအားအနုပညာသည်ကွဲပြားခြားနားသောသမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောပြလိမ့်မည်ဟုသင်ကဆိုခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ပုံရိပ်နှင့်စာတန်းများမကိုက်ညီပေမယ့်နှစ်ခုအတော်လေးမကြာခဏဘုံအတွက်အချို့သောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
'ငါကလေးတွေကိုဒီအကြောင်း ________' ပြောပြမယ် 'meme က' ဘယ်သူလဲ ' မှားသည်အဖြေသာကွဲပြားသည်
- တရုတ်အရုပ် (@twochiangz) နိုဝင်ဘာ 18, 2019
KnowYourMeme အဆိုအရ , ငါ့ကလေးတွေ meme ၏ပြောပြ၏မူလအစလအနည်းငယ်စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် ၁၉၉၉ တွင်တွစ်တာအသုံးပြုသူ @Wake_n_Baconအစောဆုံးဥပမာကိုအောက်ပါအတိုင်းတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၅၅ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကလေးများအား Justin Trudeau ဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိမ့်မည်။
ဒီ meme ၏ဗားရှင်းကိုရည်ညွှန်းသောအခါ blackface ၌တွေ့မြင် Justin Trudeau ၏ဗီဒီယိုပေါ်ထွက်လာ စက်တင်ဘာလ၌။
အဆိုပါ meme လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်းပျံ့နှံ့စတင်ခဲ့သည်။
သငျသညျ meme နားမလည်ကြဘူးသို့မဟုတ်ဥပမာများဝန်ကြည့်ချင်လျှင်, ဤနေရာတွင်ယခုအချိန်အထိအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြသည်။
ငါသည်ဤ Zayn Malik ခဲ့ငါ့သားသမီးတွေကိုပြောပြမယ် pic.twitter.com/Sceis894X1
- Kaneki (@The_Ranay) နိုဝင်ဘာ 19, 2019
ငါ့ရဲ့ကလေးတွေကို Steve Jobs ပဲပြောပြမယ် pic.twitter.com/O5sM1i2eMR
- Ellie sunakawa (@elliesunakawa) နိုဝင်ဘာ 19, 2019
ငါသည်ဤ Apollo 11 အမှုထမ်းခဲ့ငါ့သားသမီးတွေကိုပြောပြပါတယ် pic.twitter.com/zbIOmVwk1x
- connie not connie (@ constancesb1) နိုဝင်ဘာ 14, 2019
ငါ့ရဲ့ကလေးတွေဟာဒီ obama ဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ် pic.twitter.com/OT7EEjIJ6M
- ထူးဆန်းသောအနာဂတ် (@itsOddFuture) နိုဝင်ဘာ 15, 2019
ငါ့ရဲ့ကလေးတွေကို JK နဲ့ Jacqueline Kennedy တို့ပြောကြမယ် pic.twitter.com/3A1C4emWsD
- Alyssa (@xhodez) နိုဝင်ဘာ 18, 2019
ငါကဒီဟာတွေကို Chainsmokers တွေလို့ပြောတယ် pic.twitter.com/7gXrGUwffs
- mattfred (@itsmattfred) နိုဝင်ဘာ 18, 2019
- နောမိ (@IiittIewomen) နိုဝင်ဘာ 19, 2019
- OWEN? (@xowenm) နိုဝင်ဘာ 19, 2019
- အဘယ်သူမျှမအခြေအနေတွင် fleabag (@nocontextpwb) နိုဝင်ဘာ 19, 2019
- အင်းငါ emo တယ်, ဒါဘာလဲ (@ThyArtIsMemes) နိုဝင်ဘာ 17, 2019
ဒီကတ်ကိုဘိန်း (Kurt Cobain) ကိုကျွန်တော့်ကလေးတွေကိုပြောပြမယ် pic.twitter.com/flOF60QL6A
- Kyle (@godvfwine) နိုဝင်ဘာ 19, 2019
ငါ့ရဲ့ကလေးတွေကို Floyd Mayweather ပြောပြပါ ဦး pic.twitter.com/Ax04zecvLk
- sebastian grewal (@coochiecrumbs) နိုဝင်ဘာ 18, 2019
ဒီ boston လက်ဖက်ရည်ပါတီဖြစ်ခဲ့သည်ငါ့ကလေးတွေကိုပြောပြမယ် pic.twitter.com/AxITUEqgiV
- ?? ‍♀️ (@stephirnie) နိုဝင်ဘာ 19, 2019
- perc nowitzki (@ogmaxb) နိုဝင်ဘာ 18, 2019
- Alhan Gençay (@alhan) နိုဝင်ဘာ 20, 2019
- Bolu babalola (@BeeBabs) နိုဝင်ဘာ 20, 2019
ငါ့ရဲ့ကလေးတွေကို Zayn Malik လို့ပြောလိုက်မယ် pic.twitter.com/MUHhfYMRuD
- Tracy Beaker (@daoriginaltracy) နိုဝင်ဘာ 20, 2019
ငါ့ရင်သွေးလေးတွေကိုဒီရာဇပလ္လင်ရာဇ ၀ တ်ကောင်လေးလို့ပြောလိုက်မယ် pic.twitter.com/Wrnp5Ut177
- Callum O'Dwyer (@callumjodwyer) နိုဝင်ဘာ 20, 2019
- စူပါ saiyan စူပါမင်း (@ MAZ3BRA1N) နိုဝင်ဘာ 16, 2019
ငါသည်ဤ Neil အမ်းစထရောင်းဖြစ်သည်ငါ့ကလေးတွေကိုပြောပြမယ် pic.twitter.com/AX8MoG2iVu
- KraftWYA⁉️ (@KrafWy) နိုဝင်ဘာ 15, 2019
ပိုများသော memes အဘို့, Instagram ပေါ်မှ The Tab ကိုလိုက်နာပါ။
Harry စတိုင်များ Caroline flack ခြိနျးတှေ့ခဲ့ပါ
• ဤ Baby Yoda မှတ်တမ်းများသည်မည်သည့်နေရာမှလာသနည်း။ ကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်အလွန်ချစ်ရသနည်း။
•ဤကျွန်ုပ်သည် Celeb မှတ်တမ်း ၄၉ ခုဖြစ်သည့်အတွက် ၄ င်းသည်တီဗွီတွင်အကောင်းဆုံးပြသခြင်းဖြစ်သည်ကိုသတိရစေလိမ့်မည်
• ဤရွေ့ကားအစဉ်အဆက်ကြောင် memes မှာအော်ဟစ်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး 28 ဖြစ်ကြသည်